अर्थ Archives - Page 13 of 13 - Suvham News
Feb192016 by gsmktmNo Comments
सुनको भाउ : साताभर उतारचढाव, आइतबारकै भाउमा कारोबार
सुनको भाउ पुनः उकालो लागेको छ । साताको सोमबारदेखि समान्य घटिरहेको सुनको भाउ शुक्रबनर प्रतितोला ५ सय रुपैँयाका दरले बढेको हो । भाउ बढेसँगै शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला ५५ हजार ५ सय रुपैँयामा कारोबार भइरहेको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ५५ हजार २ सय ५० रुपैँयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । साताको आइतबार छापावाल सुन ५५ हजार ५ सय र तेजावी सुन ५५ हजार २ सय ५० पुगेको थियो । साताको दोस्रो दिन सोमबार ११ सय रुपैयाँले सस्तिएको सुनको भाउ त्यसयता बढेको हो । चाँदीको भाउ पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ बढेर सातसय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी आइतबारको तुलनामा शुक्रबार तोलामा पाँच रुपैयाँ सस्तो हो । आइतबार तोलाको सातसय ४५ मा कारोबार भएको थियो । Source: BusinessSansar
प्रजातन्त्र आएको ६५ वर्ष नाघ्यो, खै जनताको आर्थिक समृद्धि ?
समष्टिगत आर्थिक सूचकांक र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनाका आधारमा प्रजातन्त्र स्थापना पछिको ६५ वर्षभन्दा लामो योजनाबद्ध आर्थिक विकासको परिणाम निराशाजनक रह्यो । आर्थिक सर्वेक्षण ०७१÷७२ का अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन २,१२४.६ अर्ब बराबर र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय यूएस ७७२ मात्र रहेकाले नेपाल अझै पनि संसारका १० वटा अत्यन्त निर्धन मुलुकमध्ये एउटा हो । विगत पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालू आव ०७२÷७३ मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवमा मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेरा बैंकबाट हालै प्रकाशित तथ्यांकअनुसार आव ०७२÷७३ मा व्यापार घाटा कहालीलाग्दो रूपमा बढेको र एक वर्षको बजेटको आँकडा नाघेर ६८९.४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको, कुल निर्यात (८५.३ अर्ब) ले एउटा वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको आयात (११० अर्ब) पनि धान्न नसकेको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लग
Feb182016 by gsmktmNo Comments
प्रभु बैंकले ल्यायो लगानीको नयाँ योजना, लगानीकर्तालाई सुरक्षित अवसर
प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । एक कार्यक्रमका बिच बैंकले वेल्थ म्यानेजमेन्ट सर्भिस नामक नयाँ योजना अघि सारेको हो । वेल्थ म्यानेजमेन्ट सर्भिसअन्र्तगत ग्राहकले आफ्नो डिपोजिट्मा रहेको फण्डस्लाई बढि भन्दा बढि नाफामुलक क्षेत्रमा लगाउने अवसर पाउनेछन् । हालसम्म ‘पोर्टफोलियो’ म्यानेजमेन्ट नेपालमा सुरु नभएको अवस्थामा ग्राहकको फण्डलाई विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्नको लागि यो सेवा लाभदायक हुने बैंकले बताएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार शेरचनले लाभदायक तथा सुरक्षित प्रतिफल पाउन सक्ने क्षेत्रहरुबारे ग्राहकलाई जानकारी दिने तथा ‘फण्ड्स’ सहि क्षेत्रमा परिचालन होस् भन्ने उद्येश्यले वेल्थ म्यानेजमेन्ट सर्भिस सुरु गरिएको बताए । शेरचन भन्छन्, “प्रभु बैंकको नविनतम् योजनाले लगानीको लागि ग्राहकलाई उत्प्रेरणा जगाउनुको साथै बजार र त्यहाँका गतिविधीबारे जानकारी गराउन पनि निकै उपय
Feb172016 by gsmktmNo Comments
चिनको अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई क्षति ओरालो लाग्दै विश्व अर्थतन्त्र
चीनको व्यापार घट्यो सन् २०१६ को जनवरी महीनामा चीनको व्यापारमा उच्च कमी आएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । घरेलु तथा विश्वव्यापी मागमा आएको कमीका कारण गत महिनामा चीनको निर्यात र आयात दुवैमा कमी आएको भन्सार विभागद्धारा सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको हो । तथ्यांकका अनुसार, सो अवधिमा निर्यात ११ दशमलव २ प्रतिशत घटेर १ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड डलरमा आएको छ भने आयात पनि १८ दशमलव ८ प्रतिशत घटेर १ खर्ब १४ अर्ब २० करोड डलरमा ओर्लिएको छ । समाचार संस्था ब्लुमवर्गले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी अर्थ्विद्हरूले जनवरीमा निर्यात र आयात क्रमशः १ दशमलव ८ प्रतिशत र ३ दशमलव ६ प्रतिशत घट्ने अनुमान गरेका थिए । जनवरीमा व्यापारमा आएको उच्च कमीले विदेशी माग कमजोर बनेकोप्रति सङ्केत दिएको बताइएको छ । गतवर्ष चिनियाँ अर्थतन्त्र सन् १९९० यताकै कमजोर अर्थात् ६ दशमलव ९ प्रतिशत बढेको थियो र यो वर्ष अर्थतन्त्र थप सुस्ताउने अनुमान छ । सा
डलरको भाउ बढ्यो, नेपाली मुद्रा आजसम्मकै कमजोर
नेपाली मुद्रा अहिलसम्मकै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । अमेरिकी डलरको भाउको तुलनामा नेपाली मुद्रा हालसम्मको कमजोर भएको हो । केही समययता बलियो हुँदै गएको डलरको भाउ बुधबार पनि उकालो लागेसँगै नेपाली मुद्रा डलरसँग कमजोर देखिएको हो । बुधबार डलरको भाउ २९ पैसाले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि अमेरिकी डलरको विनिमय दर १०९.७७ पैसा तोकेको छ । बैंकहरुले डलरको विनिमय दर एकसय १० रुपैयाँ १० पैसासम्म तोकेका छन् । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको ’रिफरेन्स रेट’ अनुसार अमेरिकी डलर यसअघि डलर फागुन ३ गते अर्थात सोमबार सबैभन्दा उच्च मूल्यमा पुगेको थियो । सोमबार डलरको भाउ १०९ रुपैयाँ ४८ पैसा पुगेको थियो । बुधबार वाणिज्य बैंकहरुले अमेरिकी डलर एकसय १० रुपैयाँमा कारोबार गरिरहेका छन् । अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैँयाँका आधारमा निर्धारण हुन्छ । १४ वर्षअघि सरकारले एकसय भारु बराबर एकसय
Feb162016 by gsmktmNo Comments
एकै दिन आठ सयले घट्यो सुनको भाउ
दुई सातापछि सोमबार पहिलोपटक प्रतितोला एक सय रुपैँयाका दरले घटेको सुनको भाउ मंगलबार एकै दिनमा ८ सय रुपैँया प्रतितोलाका दरले घटेको छ । बजार घटेसँगै, मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ५४ हजार ६ सय रुपैँयाका दरले कारोबार भइरहेको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ५४ हजार ३ सय ५० रुपैँयाकार दरले कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसअघि,सोमबार छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ५५ हजार ४ सय रुपैँया थियो भने तेजावी सुनको भाउ ५५ हजार १ सय ५० रुपैँया प्रतितोला थियो । महासंघका अनुसार चाँदीको भाउ पनि पाँच रुपैयाँ सस्तो भएको छ । चाँदी तोलाको सातसय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार चाँदी तोलाको सातसय ४५ रुपैयाँ थियो । सुनको आयातमा तीन गुणा वृद्धि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सुनको आयात भने तीन गुनाले बढेको छ । नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यकीय वस्तु आयातमा समेत समस्या सिर्जना भइरहँदा सु
Feb12016 by gsmktmNo Comments
भारतसँगको व्यापार घाटा ७० प्रतिशत
श्रम तथा रोजगार र वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहराले भारतसँग ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म व्यापार घाटा भएको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रेस क्लब भैरहवाद्धारा आइतबार आयेजित एक पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले भारतसँग धेरै परनिर्भर भएकै कारण अत्यधिक व्यापार घाटा भएको बताएका हुन् । मन्त्री बोहराले हाल भइरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा छलफल हुने बताए । वैकल्पिक बन्दरगाहका रुपमा भारतको विशाखापटनमलाई व्यवस्थित गरिन लागेको समेत उनले जानकारी गराए । विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता भएको र पहिलो चरणमा इजरायलसित सम्झौता भएअनुसार ६० जना केयर गिभरका रुपमा त्यहाँ जान थालेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बोहराले विभिन्न युरोपेली देश, साउदी अरेबिया, मलेसियासँग रोजगारको सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा सरकारले सम्झौता गर्न लागेको बताउनुभयो । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वा्चित सांसदसमेत
Dec282015 by gsmktmNo Comments
सुविसुले ल्यायो नयाँ योजना, ग्राहकका लागि सहजिकरण
नेपालको एक अग्रणी इन्टरनेट, नेटवर्क र टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केवलनेट प्रा।लि।ले नयां ग्राहक सेवा केन्द स्थापना गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिक्रित बिनय मोहन साउदले सो ग्राहक सेवा केन्द्रकोे उद्घाटन गरे । उक्त सेवा केन्द«बाट कम्पनीले ग्रहाकबर्गहरुलाई आफ्ना सेवा सम्बन्धि सम्पुर्ण जानकारी, सेवाहरुको विक्रि तथा वितरण, रकम भुक्तानी सेवा, एवमं सेवा खरीद पश्चात आफ्टर सेल्स सपोर्ट लगायतका सम्मपूर्ण सेवा र सुविधाहरु दक्ष तथा अनुभवि कर्मचारीहरुबाट प्रदान गर्नेछ । Source: Businesssansar
भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण करिब चार दशकपछि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले करिब दुई प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने भनेतापनि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनबाट आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखिएको छ । त्यसो त नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने पनि विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् । यसैबिच विजनेस संसार डटकमले नाकाबन्दीको प्रभाव, अपनाउनुपर्ने सजगता, सरकारका कदम र आगामी दिनमा बनाउनुपर्ने रोडम्यापका विषयमा वरिष्ठ अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ ,उनै अर्थविद् डा.खनालसँग गरिएको कुराकानी : नाकाबन्दीमा अर्थतन्त्र : भुकम्पले ठूलो नोक्सानी बेहोरीरहेको अवस्थामा भारतले अप्रत्यासित रुपमा गरेको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालिन मध्यकालिन र दिर्घकालिन असर पार्ने गरी समस्या थपेको छ । तत्कालिन अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, ई
Dec272015 by gsmktmNo Comments
नयाँ शक्ति फलाक्नेहरुलाई डा. रुद्र पाण्डेको सटिक सुझाव
अचेल थरि थरिका मान्छेहरु नयाँ शक्तिका चर्चामा व्यस्त छन्। पत्रकार, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, ब्यापारी र बिद्यार्थीहरु सबै कुनै न कुनै रुपमा नयाँ शक्तिको बहसमा सम्मिलित छन्। तर नयाँ शक्ति कस्तो हुनुपर्छ र त्यसका कार्यगत नीति कस्ता हुन्छन भन्ने प्रश्न न कसैले सोधेको छ न कसैले जबाफ दिएको छ। सबै गहकिला शब्दहरुमा रुमलिएका छन्। ती शब्द र बचनहरु पुराना पार्टीका नारा र बिधानमा पनि नभएका त होइनन नी। कार्यन्वयन त नभएका हुन्। कार्यन्वयन किन भएनन् भनेर कोही बोलेका छैनन्। सबै अर्कालाई दोष दिन र आफुलाई स्याबासी दिंने होडमा रमाईरहेका देखिन्छन। नयाँ शक्तिको कुरा गर्नु भन्दा पहिला पुराना शक्ति किन बेकम्मा साबित भए भन्ने बुझ्न जरुरि छ। त्यो प्रष्ट भए पो नयाँ पार्टीलाई पुराना पार्टीहरका कमि कमजोरी बाट टाढा राख्न सकिन्छ। पुरुना पार्टीका कमजोरीहरु बुंदागत रुपमा राख्दा: १. असक्षम: पार्टी नेतृत्वमा असक्ष